विश्वकप विशेषः विश्वकपका लागि कस्तो छ जापान र सेनेगलको तयारी ?
विश्वकपको ग्रुप एचमा सबैभन्दा बलियो टोली मानिएको एसियाली टोली जापान हो । उसको विश्वकप अनुभव पनि राम्रो रहेको छ । विश्वकपमा सानदार खेल प्रदर्शन गर्न जापान धेरैपटक सफल भएको छ ।
यसपटकको विश्वकपमा पनि नकआउट चरणमा जापान पुग्ने फुटबल विश्लेषकहरु बताउँछन् । सन् १९३८ मा विश्वकपमा छनोट भएता पनि राजनीतिक अवस्था प्रतिकुल नभएका कारण जापानले विश्वकप खेल्नाबाट पछि हटेको थियो । सन् १९९८ आएपछि बल्लमात्र जापान विश्वकपका लागि छनोट हुन सक्यो ।
जापान र दक्षिण कोरिया मिले संयुक्त रुपमा विश्वकप समेत आयोजना गरेका थिए ।
बेस्ट फिनिसिङः ९ औ स्थान, २००२
पछिल्लो विश्वकपः ग्रुप स्टेजबाटै आउट
इटालियन प्रशिक्षक अल्बर्टो जाचोरोनीले सन् २०१० देखि जापानको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
गोलरक्षकः इजी कावासिमा, सुसाकु निषीकाआ, सुइची गोण्डा
कावासिमा, हिगासिगुची, नाकामुरा, नागामोता, माकिनो, योसिदा, एच. साकाइ, जी साकाइ, सोजी, इन्दो, ऐडा, हसिबी, इणगुची, योआमा, होण्डा, इउइ, कागवाना, यामागुची, हारागुची, उसामी, सिवासाकी, आसमिना, मिसाओ, ओकाजाकी, ओसाका, मुतो, असानो
अफ्रिकी देश सेनेगलले विश्वकपमा राम्रो इतिहास बनाउन सफल भएको छ । सन् २००२ मा पहिलो पटक छनोट भएको विश्वकपमा सेनेगल सातौ भएको थियो । यसपटक पनि विशवकपमा राम्रो खेल प्रदर्शन गर्ने तयारीमा सेनेगल रहेको छ ।
विश्वकपमा उपस्थितिः सन् २००२ मा पहिलो पटक छनोट
बेस्ट फिनिसिङः सातौ स्थान, २००२
पछिल्लो विश्वकपः २००२
अब्दुलाए डियालो, खादिम नादिय, अलफ्रिड गोमिस, कालीडोउ कोउलिबे, लामिने गासामा, पेप एलिनोउ एन्डीआए, चिख डियाने एनडोए, चिखोउ कोउएटे, इद्रीसा गाना गएने, केइटा बल्डे डियाओ, इस्मालिया सार, मोउसा सो, मोउसा कोनाटे, मोउसा वाग, सालिफ साने, अल्फ्रीड एनडिआए, साइडो माने, डायफ्रा साखो, कारा एम्बोडजी, एमाए नियाङ, योसुफ सबाले, मामे बिराम डिओफ, सालिओ सिस
यस पटकको विश्वकपमा सेनेगलको टोली बलियो रहेको र अर्को चरणमा पुग्ने फुटबल विश्लेषकहरु बताउँछन् । साइडो माने, नियाङ, साखो जस्ता खेलाडीहरु उच्च फर्ममा रहेका छन् ।
विश्वकै प्रतिष्ठित लिगबाट खेल खेलिरहेका सेनेगलका खेलाडीहरुले यसपटक चमात्कार गर्ने फुटबल विश्लेषकहरु बताउँछन् ।